DHEGEYSO-Safiirkii hore ee Jabuuti u joogey Soomaaliya oo la sagootiyey. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Safiirkii hore ee Jabuuti u joogey Soomaaliya oo la sagootiyey.
Agoosto 13, 2016 10:56 g 0
Muqdisho, Aug 14 2016—Dowladda wadanka Jabuuti ayaa dhowaan ku dhawaaqday inay bedeshey safiirkii dalkeeeda u fadhiyey magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya Mudane Dayib Dubad Rooble.
Waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu sagootinayey Mudane Dayib Dubad Rooble, ayna ka qaybgaleen mas’uuliyiin katirsan dowladda Soomaaliya oo uu kamid ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
DHEGEYSO-Jubbaland oo maamul cusub u magacawday degmada Luuq.